काठमाडौं । राजधानीको बालाजुमा १४ वर्षीया बालिका बलात्कारको शिकार भएकी छिन् । तारकेश्वर नगरपालिकास्थित शेसमतीमा एक खाजाघरमा काम गर्ने बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक किशोर पक्राउ परेका छन् । बलात्कृत बालिकाले साजन बोहराले बलात्कार गरेको वयान...
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) राती शताब्दीकै सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । चन्द्रग्रहणको असर राति ११ बजेर ८ मिनेटमा सुरु हुने भएपनि चन्द्रग्रहणको प्रहर भने राति १२ बजेर ९ मिनेटमा सुरु हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक...
डाक्टर गोविन्द केसीलाइ काठमाडौं ल्याइयो
काठमाडौं । २० दिनदेखि जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याइएको छ । डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन जुम्ला पुगेको सरकारी टोलीलाई केसीका समर्थकले अवरोध गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । आफ्ना समर्थकमाथि...
डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न जुम्ला जान लागेको टोलीलाई चिकित्सक संघको असहयोग
काठमाडौँ । डाक्टर गोबिन्द केसिको स्वास्थ अवस्था बुझ्नका लागि जुम्ला पठाउन लागेको चिकित्सक सहितको टोलीलाई मध्यस्थता गरिदिन सरकारले गरेको आग्रह नेपाल चिकित्सक संघले इन्कार गरेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन...
रसुवाका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाइ नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा
रसुवा । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सरकारी/सार्वजनिक सेवाको साथमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा समेत पाउने भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलको योजना तथा विशेष प्रयासमा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा...
काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले महिनावारी हुनुलाई अशुद्ध वा अछूतको रुपमा विभेद गरिनु सामाजिक अपराध भएको बताएका छन् । पहिलो पटक नेपालमा सरकारी स्तरबाट मनाइएको राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको उद्घाटन गर्नुहुँदै सभामुख महराले यस्तो बताएका...
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवाग्राहीलाई सास्ती
इटहरी । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीका कारण सेवाग्राहीले यतिखेर निकै समस्या र सास्ती ब्यहोर्नु परिरहेको छ । पैसा खर्च गरेर पनि समयमा ल्याब रिपोर्ट प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नरहेको सेवाग्राहीका अधिक गुनासो बढिरहेको...
कसरी चरम यौनसन्तुष्टि पाउने ? यी टिप्स अपनाउनुहोस्
म २७ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । हाम्रो एउटा बच्चा छ । म यौन सम्पर्कका बेला चरम आनन्द प्राप्त गरेको महसुस गर्दिनँ । चिन्ता धेरै लिने मानिसले यौन आनन्द लिन सक्दैनन् भन्ने सुनेको छु...
बिराटनगर । विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटलले बिगत एक बर्षको अवधिमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी ४७ हजार विरामीको निःशुल्क उपचार गरेको छ । ०७४ बैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिमा सञ्चालित शिविरबाट ४७ हजार...
दाँत पहेंलो भएर हैरान हुनुभएको छ ? नआत्तिनुस् घरमै बसीबसी दाँत चम्किलो बनाउन सक्नुहुनेछ
काठमाडौं। दाँत शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग त हो नै, सौन्दर्यमा पनि दाँतले निकै ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। मिलेका र सेता, चम्किला दाँतले व्यक्तिको सुन्दरतामा निखार ल्याउँछ। दाँतलाई सेतो र चम्किलो बनाउनको लागि आजकल नयाँ प्रविधिहरु प्रयोग...